You are here: Home › Ireo daty sy toerana misy ny fankalazana
Mankalazà ny fitiavana ny fiarovana ny varika aminay ny Zoma faha 30 Oktobra 2020 ! Maro ireo fankalazana sy hetsika izay mety voatery atao virtoaly na hetsika tsy mivantana noho ny fisian’ny valan’aretina COVID-19. Na izany aza anefa dia manantena izahay fa hisy ihany ireo hetsika mivantana ho tanterahina eto Madagasikara mandritra ny volana Oktobra sy Novambra.
Ny daty sy ny toerana hanantanterahina ny fankalazana dia ho ambara eto amin’ity pejy ity araka izay ahazoana ny vaovao avy amin’ireo mpikambana.
Raha mahafantatra daty sy toerana hankalazaina ny andron’ny varika ianao dia mifandraisa aminay.
Raha toa tsy misy hetsika fankalazana kosa eo amin’ny toerana misy anao dia afaka manomana ny hetsika ianao! Tsidiho ny rohy misy ny toro-lalana ho an’ny fankalazana tsy mivantana na virtoaly nefa azo tanterahina mivantana ihany koa.
30 Oktobra 2020: Virtual Gala
Fifaninana iarahana amin’i Susie Louis avy amin’ny Conservation Fusion sy Jessica Deville avy amin’ny Louisiana Lemur Foundation (Ho ambara manaraka eto ny daty)
Valan-dresaka momba ny fitsidihana an’i Madagasikara ao anatin’ilay “Madagascar Travel Chat” miaraka amin’ireo Mpisera-dia matihanina (Ho ambara manaraka eto ny daty)
Ho avy tsy ela ny daty: fandefasana horonan-tsary mihetsika sy lalao maro ao amin’ny pejiny Facebook
Hetsika sy fankalazana mivantana any ivelan’i Madagasikara
Hetsika sy fankalazana mivantana eto Madagasikara
Ho avy tsy ho ela ireo andinindiny hafa
Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy
Hetsika ho tanterahina : ho avy tsy ho ela ny andinindiny